Global Voices teny Malagasy » Togo : Mihantsy an’i Faure Gnassingbé Eyadema Ny Fiaraha-mientana “Ndeha Hovonjena i Togo” · Global Voices teny Malagasy » Print
Togo : Mihantsy an'i Faure Gnassingbé Eyadema Ny Fiaraha-mientana “Ndeha Hovonjena i Togo”
Voadika ny 20 Jona 2012 4:53 GMT 1	 · Mpanoratra Rakotomalala Nandika avylavitra
Sokajy: Afrika Mainty, Togo, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Fifidianana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Politika, Vaovao Mafana, Zon'olombelona
Nivadika ho fifandonana tamin'ny mpitandro filaminana ny diabe iray am-pilaminana nataon'ny fiaraha-mientana “Ndeha hovonjena i Togo”  tamin'ny 12 Jona teo. Nanodidina ny 120 ireo naratra voarakitra an-tsoratra  nandritra ireo fifandonana ny 12 sy 13 Jona. Isan'ny tafiditra ao anatin'ny fitakian'ireo nanao fihetsiketsehana ny fampiharana ny zava-boalazan'ny Kaomisionam-pirenena momba ny Zon'Olombelona mikasika ny fampijaliana sy ny fanavaozana ifotony ny Lalampanorenana. Ankehitriny i Togo  dia anaty tetezamita politika taorian'ny fifidianana izay ho filoham-pirenena tamin'ny 2005 nolavin'ny betsaka ka nahatonga ho eo amin'ny fitondrana an'i Faure Gnassingbé Eyadema , zanaky ny filoha teo aloha Gnassingbé Eyadema. Misy fihetsiketsehana iray nomanina hatao ny 18 Jona.
Ny nahaterahan'ilay fiaraha-mientana
Ivondronanà fikambanana maro samihafa mpiaro ny zon'olombelona sy antoko politika ao anatin'ilay fiaraha-mientana “Ndeha hovonjena i Togo”. Teraka tamin'ny Alarobia 04 aprily tao Lomé ary misy fikambanana 17 izay ny 7 dia misahana fiarovana zon'olombelona avokoa  ODDH. Ilay fiaraha-mientana dia teraka avy amin'ny fahitàna ny zava-misy eo amin'ny tontolo politika, toekarena ary sosialy ao Togo  :
Ny dingana demaokratika natomboka tao Togo efa hatramin'ny taona 1990 dia sahirana mihitsy mitady ny làlany noho ny tsy fisian'ny fifandimbiasana teo amin'ny fitantanana ny Fanjakana. Araka izany dia mitohy hatrany mamakivaky olana saro-bahàna tsy mbola nisy toa azy ny firenentsika, ary amin'ny sehatra rehetra.
Eo amin'ny lafiny politika, ireo fifanarahana nivoaka avy aminà fifampidinihana isan-karazany dia tsy nisy nahitàna izay tena fampiharana azy marina sy nahitam-bokatra. Ny tena mampanahy dia ny fitsofohana matetika sy mivatravatra ataon'ny olon'ny tafika togoley any anatin'ireo adihevitra politika, izay tena mitàna ny fahefana ara-politika marina, manitsakitsaka ny andraikitra repoblikana momba ny tsy fiandaniana sy tsy fitanilàna.
Eo amin'ny lafiny lalampanorenana, tsara ny anamarihana fa ireo andrim-panjakana rehetra eo amin'ny Repoblika nomena andraikitra hisahana ny fandrindràna ny fiainana ara-demaokratika sy hanara-maso ny asan'ny fanjakana dia indrisy fa ampiasaina ho toy ny fitaovana fotsiny ihany.
Eo amin'ny lafiny toekarena, ny fanaovana gaboraraka ny harem-pirenena nataon'olom-bitsy nandritra ny am-polotaona maro dia nampikororosy ny firenena ho any anaty hantsana mangitsokitsoky ny fitrosàna.
Eo amin'ny lafiny sosialy, ity fangiazana ny harem-pirenena ataon'ny vitsy an'isa ity dia nampiditra ny 65% mahery amin'ny vahoaka ho ao anaty fahantrana mahatsiravina ; ny ankamaroan'ny tokantrano no sady tsy afaka intsony na dia hihinana iray vilia isan'andro aza, no tsy afaka koa hiantoka ny ara-pahasalamana, tsy afaka hiantoka ny fampidirana an-tsekoly ny zanany.
Tonga amin'ny fara-tampony ireo fanitsakitsahana faobe ny zon'olombelona, miaraka amin'ny fampiharana fampijaliana sy ireo endrika maharikoriko samihafa, tsy manaja ny maha-olona sy mirefarefa amin'ny tany, voarara sy sazian'ny Fifanarahan'ny Firenena Mikambana, izay nosoniavin'i Togo rahateo 25 taona lasa izay.
Ireo tanjona apoitran'ilay fiaraha-mientana no ambaran'i Fabbi Kouassi ao amin'ny bilaoginy, manome antsipirihany amin'ny nahaterahan'ilay vondrona . Angatahan'ilay vondrona, araka ny lazain'i Kouassi :
1) ny hialàn'ny governemanta tsy misy hatak'andro, izay helohina ho nanao hosoka sy nampiasa hosoka
2) ny hanondroana sy hamaizana ireo rehetra izay nandray anjara tamin'ny fanaovana hosoka ny tatitry ny CNDH
3) ny hametrahana marina sy anatin'ny fotoana fohy ireo tari-dàlana napetraky ny CNDH tao anatin'ny tatitra tena izy avy aminy
4) ny fanafoanana ireo dingana rehetra sy fitsarana nitarika tamin'ny fisamborana sy fanamelohana ireo olona nampangaina ho nanohintohina ny filaminana anatin'ny firenena, hatramin'ny an'ireo olona hafa rehetra nampijaliana tao amin'ny ANR
5) ny fanomezana onitra sy famerenana avy hatrany an'ireo manamboninahitra sy miaramila nesorina tsy an-drariny tao amin'ny tafika tamin'ilay raharaha nambara ho fanohintohinana ny filaminana anatin'ny firenena
6) fandroahana ireo mpitsara rehetra nanan-draharaha ary nahafantatra tsara ny raharaha mikasika ireo olona voarohirohy, nanao, tamin'ny fomba mazava sy mivantana, fihetsika fampijaliana sy ireo endrika maharikoriko samihafa, tsy manaja ny maha-olona sy mirefarefa amin'ny tany natao azy ireny tao amin'ny ANR sy tany an-toeran-kafa, nefa mbola nanohy hatrany ny dingam-pitsarana hatrany amin'ny fanamelohana.
Ity ny lahatsary nanambaràna ny nitsanganan'ilay fiaraha-mientana :
Nikarakara diabe marobe ilay fiaraha-mientana hatramin'ny nitsanganany mba hitakiana ny hisian'ny demaokrasia bebe kokoa sy hanajàna ny zon'olombelona. Tao Lomé, i Sylvio Combey mitantara iray amin'ireny diabe ireny izay natao ny 24 May :
Ny teboka fototra telo lehibe tamin'io diabe io araka ny tenin'i Me Adjare dia ny tsy fandraisan'ny fahefana mpanatanteraka togoley ho anatin'ny kajiny ireo taridàlan'ny CNDH, mifandraika amin'ireo asa fampijaliana, tolo-dalàna roa napetraka tao amin'ny antenimieram-pirenena momba ny lalàm-pifidianana sy ny fitsinjaram-paritra ara-pifidianana, nefa koa ny famerenana ireo solombavambahoaka ANC sivy nailika tao amin'ny antenimieram-pirenena. Ho an'ilay Fiaraha-mientana Ndeha Hovonjena i Togo, izany fihetsiky ny governemanta izany dia manitsakitsaka ny toerana noraisin'ny CEDEAO mandràra ny fanovàna ireo rijan-teny momba ny fifidianana tsy ho azo atao enim-bolana mialoha ny fotoam-pifidianana tsy misy marimaritra niraisana.
Fifandonana Mahery Vaika
Noraran'ny mpitandro filaminana tamin'ny alàlan'ny herisetra ireo diabe nokarakarain'ilay Fiaraha-mientana. Combey mitantara ny vokatr'ireny fifandonana ireny  :
Tamin'ny andro faharoan'ny revolisiona, ny hetsiky ny Fiaraha-mientana « Nheda Hovonjena i Togo » dia nivadika ho zava-doza. Noraran'ireo polisy tamin'ny alalan'ny toraka grenady mandatsa-dranomaso sy tsy nisy indrafo ireo vahoaka nilamina tonga nitangorona tao amin'ny tanànan'i Déckon, ho toy ny hetsi-panoherany. Ny andron'ny 12 Jona 2012 ilay Fiaraha-mientana dia nilaza ho nahita naratra 54 ka 24 amin'ireo no tena voa mafy, ny taorian'io 65 ka 32 voa mafy. Izao koa, olona 15 no voasambotra ny 12 Jona 2012, 63 ny 13 jona 2012, izay ampolony noraisina tao amin'ny eglizy Saint Augustin d’Amoutivé raha ny nambaran'ilay CST izay nanamafy fa ny ankamaroan'ireo fitaovana fanamafisam-peo rehetra napetraka teny an-kianja dia voafaoka sy nogiazana avokoa. Ny zava-nitranga dia nanosika ilay mpandrindran'ny CST, Zeus Ajavon hampiaka-peo [..] Amin'izay indrindra, nangataka ny minisitry ny filaminana anatiny sy ny fiarovana ny sivily ny governemanta mba « handray fepetra fanampiny hiantohana ny filaminan'ny olona sy ny fananany, ary ny fahafahan'ny rehetra mivezivezy ». Fihetsika izay mety vao mainka hanamafy ny krizy misimisy kokoa. An-dàlana ny revolisiona Kpatima.
Sary azo nandritra ireo fifandonana manaporofo ny hamafin'izany fifandonana izany [Tandremo: Sary mahery setra mety hanafintohina ]  :
Famoretana ireo Fihetsiketsehana tamin'ny 13 Jona 2012, hetsika nataon'ny Fiaraha-mientana Ndeha Hovonjena i Togo tao amin'ny FlikcR, nahazoana alàlana.
Lahatsary iray mampiseho polisy midaroka amin'ny fomba feno habibiana ny iray amin'ny mpanao fihetsiketsehana [Tandremo: Sary mahery setra mety hanafintohina] :
Ao amin'ny Twitter, ireo mafàna fo togoley dia mampiasa ny tenifototra #occupyLome  mba hifampizaràna vaovao mikasika ireo fihetsiketsehana amin'ny fotoana tena itrangany.
i Wilfried Toussine ao Togo dia namoaka tao amin'ny twitter [en] hoe :
“@Toussine : “Mitifitra entona mandatsa-dranomaso an'ireo mpanao fihetsiketsehana ny polisy ao an-drenivohitr'i Togo http://azstarnet.com/news/world/police-fire-tear-gas-at-protesters-in-togo-capital/article_8b6569ec-0f14-5ed0-acd7-1fc206ac483c.html  //#leguede  #occupylome  “
Philoticus manampy hoe :
@Philoticus:  #Togo: mila atosika hivoaka any ireo mpanao kely tsy mba mamindro, eto ary androany http://bit.ly/MjPdpJ #TGInfo #Togo #OccupyLome
sy mizara vaovao mampiahiahy mikasika ny mpitarika ny diabe, M Célestin Agbogan :
@Philoticus  : #TOGO: Voasambotra sy voasintontsintona i M. Célestin Agbogan – Mihetsika ny #FIDH http://bit.ly/MjPWqS #TGInfo #OccupyLome
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/06/20/34475/
 fiaraha-mientana “Ndeha hovonjena i Togo”: http://www.collectifsauvonsletogo.com/
 120 ireo naratra voarakitra an-tsoratra: http://www.collectifsauvonsletogo.com/cst-declaration-liminaire-conference-de-presse-du-13-juin-447
 Faure Gnassingbé Eyadema: http://fr.wikipedia.org/wiki/Faure_Gnassingb%C3%A9_Eyadema
 fikambanana 17 izay ny 7 dia misahana fiarovana zon'olombelona avokoa: http://fabbikouassi.wordpress.com/tag/le-collectif-sauvons-le-togo-est-ne/
 fahitàna ny zava-misy eo amin'ny tontolo politika, toekarena ary sosialy ao Togo: http://www.collectifsauvonsletogo.com/le-collectif
 bilaoginy, manome antsipirihany amin'ny nahaterahan'ilay vondrona: http://fabbikouassi.wordpress.com/2012/04/07/le-collectif-sauvons-le-togo-lance-ce-mercredi-a-lome-pour-instaurer-la-democratie-par-le-respect-des-droits-de-lhomme/#more-1831
 iray amin'ireny diabe ireny izay natao ny 24 May : http://sylviocombey.wordpress.com/2012/05/24/marche-du-cst-au-togo-le-retour-des-9-deputes-sinvite-dans-les-revendications/#more-4433
 mitantara ny vokatr'ireny fifandonana ireny: http://sylviocombey.wordpress.com/2012/06/14/togo-la-revolution-kpatima-se-corse/#more-4469
 manaporofo ny hamafin'izany fifandonana izany [Tandremo: Sary mahery setra mety hanafintohina ] : http://www.flickr.com/photos/collectifsauvonsletogo/